Sendoso: mandrisika ny firotsahana, ny fahazoana ary ny fitazonana amin'ny mailaka mivantana Martech Zone
Rehefa niasa tamin'ny sehatra SaaS lehibe aho, ny fomba iray mahomby izay fanaonay handrosoana ny dia ho an'ny mpanjifa dia ny fandefasana fanomezana tsy manam-paharoa sy sarobidy ho an'ireo mpanjifantsika kendrena. Na dia lafo aza ny vidin'ny fifanakalozana tsirairay, ny fampiasam-bola dia nahazo tambiny mahomby amin'ny fampanjariam-bola.
Miaraka amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny orinasa ary nofoanana ny hetsika, ny mpivarotra dia manana safidy voafetra hahatratrarana ny vinan'izy ireo. Tsy lazaina intsony ny zava-misy fa ny orinasa dia mitondra tabataba bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika. Ny mail mivantana dia afaka miakatra ambonin'ny tabataba, miakatra hatrany 30x ny tahan'ny valin'ny mailaka.
Raha azonao atao ny mampifantoka ny mpihaino anao amin'ny insentif mahafinaritra sy azo tsapain-tanana ary misy fiatraikany, azonao atao ny mandroso ny dia. Sendoso dia mpamatsy ireo serivisy ireo - manomboka amin'ny fisafidianana ny vokatra, ny automatique, ny fidirana amin'ny fifanakalozana, amin'ny alàlan'ny fanatanterahana. Ity paikady ity dia fantatra amin'ny hoe automatisation mailaka mivantana.
Mahagaga ny valiny, nahatratra ny mpanjifa Sendoso:
Fisondrotana 22% amin'ny fidiram-bola isaky ny vintana
Fisondrotana 35% ho an'ny fivoriana
60% ny tahan'ny valin'ny fonosana nalefa
Nikatona ny vola azo tamin'ny 450% tamin'ny fifanarahana
Fiakarana 500% amin'ny taha akaiky
Topimaso amin'ny Sendoso
Amin'ny fampiasana fanamafisana ny adiresy, Sendoso dia afaka mandefa ny vinavinanao na ny mpanjifanao vokatra manokana, ny egift, ny mora simba, na ny vokatra rehetra ivelan'i Amazon. Ny sehatra dia ampidirina amin'ireo sehatra marketing automatique lehibe, sehatra fifampiraharahana amin'ny varotra, CRM, sehatra fifandraisan'ny mpanjifa ary sehatra ecommerce.
Manatsara ny dian'ny mpividy anao
fanentanana - mandefasa karatra pop-up 3D, kahie misy marika, kitapo tote, charger portable, na entana kely swag hafa mba hidiranao ao amin'ny radarin'ny olona.
Fanapahan-kevitra - Midira am-pahombiazana amin'ireo kaonty lasibatrao amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka dimensional na palitao avo lenta mampiseho ny sary famantarana anao.
fandinihana - Manentana ny fahalianana sy finiavana eo amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny mpandefa horonantsary fanao am-peo na zava-mamy izay mampiseho ny sary famantarana anao.
Manafaingana ny fantsom-barotra
Ohatra vitsivitsy amin'ny vokatra azonao ampidirina automatique fandefasana:
Mpanokatra varavarana - Midira eo amin'ny latabatr'olona fa tsy miady amin'ny boaty misy azy miaraka amina singa hyper-personalized avy any Amazon miaraka amina sora-tanana nosoratana.
Deal Accelerators - Hamafiso ny fifandraisana ary hamita ny resadresaka fifampiraharahana amin'ny tavoahangy misy divay namboarina miaraka amin'ny sary famantarana ny orinasanao.
Mpanamboatra fivoriana - Ataovy izay handraisana fanapahan-kevitra marobe miaraka amin'ny fandefasana cupcakes, cookies, na zava-mamy hafa azon'ny birao iray manontolo zaraina.
Mampiasa Sendoso, orinasa iray rindrambaiko ho fidirana an-tserasera hatramin'ny Internet,dia nahavita nanangana $ 100M tamin'ny fantsom-pifandraisana ary 30m $ amin'ny vola azo avy amin'ny fampielezan-kevitra iray. Nandefa fonosana 345 tany amin'ny kaonty ABM izy ireo, ao anatin'izany ny karatra fanomezana, zava-mamy, sary noforonina totalin'ny fiantraikany ara-toekarena, famintinana eksekutif Total Economic Impact, ary naoty nosoratana tanana.
Ny fampidirana vokatra dia anisany Salesforce, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Pardot, Eloqua, Hubspot, Outreach, Salesloft, SurveyMonkey, Influitive, Shopify ary Magento.
Raha liana ianao hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba ahafahan'ny marketing manokana 1: 1 mamorona fahatsiarovan-tena misy dikany sy hanangana ny fantsom-pandrika COVID, mangataha demo Sendoso.
Mangataha Demo Sendoso
Tags: eloquahubspotManan-kerymagentofanentananasalesforcempivarotra pardotSales mialoha ny rahona marketingSalesLoftshopifySurveyMonkey